Imikhwa emibi enokusiphelisa isibini | IBezzia
Imikhwa emibi enokuphelisa isibini
UMaria Jose Roldan | 05/04/2021 22:00 | Ubudlelwane
Kuqhelekile ukuba kwisibini esidityanisiweyo kwaye sihlale ngexesha, uthotho lwemikhwa emibi eyenziweyo engalunganga ngekamva elihle lesibini. Ekuqaleni, le mikhwa isenokungabaluleki, nangona kunjalo, kufuneka kuthiwe ngokuhamba kwexesha umanyano lwabantu abanjalo lunokwahlukana kancinci kancinci.
Ukuba imikhwa enjalo ayipheliswa kwangexesha, izinto ezibalulekileyo ngaphakathi kwesibini zinokwenzakala njengakwimeko yethemba okanye yentlonipho. Ukuze oku kungenzeki, kubalulekile ukuba uchonge le mikhwa kwaye uyiyeke. Nayi eminye imizekelo yemikhwa emibi enokuthi yenzeke kubudlelwane.
1 The lekisa
2 Ubukho benzondo
3 Ukulwa esidlangalaleni
Ukuthelekisa kuhlala kuhlala kunenzondo kwaye kuya kufuneka uphephe ukuzisebenzisa rhoqo phakathi kwesi sibini. Umntu ngamnye uneziphene kunye nokulunga kwakhe ke akukho mfuneko yokuba uthelekise. Akucebisi nokuba uthelekiso oluchanekileyo njengolubi.
Ngaphakathi kwesi sibini akunakubakho ingqumbo kwaye ukuba kukho, kubalulekile ukuba uthethe nesi sibini ukuze usombulule izinto. Ayifanelekanga ukuxolela omnye umntu ukuba ayenziwanga ngokusuka entliziyweni. Inzondo ingcwatyiwe ingasombululwa, inokukhula ibe nkulu ngokuhamba kwexesha kwaye ibangele iingxaki ezinzima kubudlelwane.
Ukulwa phambi kwabantu ongabaziyo yenye yeendlela ezimbi ekufuneka zithintelwe ngalo lonke ixesha. Iingxaki ezahlukeneyo kufuneka zisonjululwe ngasese hayi esidlangalaleni. Kuqhelekile ukwanda kwizibini ezininzi zanamhlanje.
Kuqhelekile kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuba kwiminyaka yokuqala yobudlelwane, bobabini abantu bafumana ukunconywa kwesi sibini. Wonke umntu uyathanda ukuba umntu abamthandayo uzinikezela ngamagama amnandi othando kunye nezincomo ezithile. Ngelishwa, njengoko ixesha lihamba, ezo zincomo ziyancipha kwaye bobabini abantu banokucinga maxa onke ukuba abasathandeki kwesi sibini.
Umcimbi wobukhwele phakathi kwesi sibini ngumcimbi okhohlisayo. Ukuba nomona ngamaxesha athile yinto enokuthi ithathwa njengesiqhelo kwaye ungazikhathazi ngayo. Nangona kunjalo, ukuba umona uqhubela phambili kwaye ukhokelela kwingxaki eyoneleyo, inokubeka ubudlelwane emngciphekweni. Umona awusoze ube ngumkhwa ombi phakathi kwesi sibini.
Ngamafutshane, ezi ndidi zemikhwa azizilungelanga izibini. Ngokuhamba kwexesha, imikhwa enjalo inokulonakalisa iqabane likabani. Imikhwa kufuneka ibe sempilweni kangangoko ukuqinisekisa ukuba ubudlelwane phakathi kwabantu bobabini buya busomelela kwaye uthando luyoyisa kulo naluphi na uhlobo lwengxaki. Kuya kufuneka uyazi ukuba unakekela njani esi sibini kwaye ubeke isisombululo kwiingxaki ezahlukeneyo ezinokuvela kwiingxaki ezahlukeneyo ezinokuvela ngaphakathi kwazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Imikhwa emibi enokuphelisa isibini
I-tofu kunye nekholifulawa ikhari kunye nerayisi
Ukuhombisa igumbi lokuhlala kunye nezityalo